Lavaka Donat Mini Kambom-borona 3 ao anatiny - Fomba Fanamboarana
fomba fahandro ho an'ny hena mamy sy marikivy miaraka amin'ny saosy cranberry
tratra akoho nopetahany fromazy sy ham
akoho amam-borona crock mahia sy dumplings
inona no tompoinao amin'ny spaghetti
ranom-boasarimakirana firy amin'ny voasarimakirana
Lavaka Donat Mini Kambom-borona 3 ao anatiny
Ireto yummies kely ireto dia tsiro toy ny donky siramamy kanelina azonao any amin'ny foara… nefa tsy misy filaharana !! Fangaro mora 3 fotsiny ary efa vonona handeha ireto zazakely ireto!
Nilalao tamin'ny fomba maro samihafa aho .. ny habe kely kokoa dia nahatonga lavaka donut tsara kokoa. Nahandro haingana izy ireo ary roa minitra fotsiny. Nampiasa lovia taratasy roa aho mba hanipazana azy ireo ao anaty siramamy. Mora ny mamindra azy ireo fotsiny etsy sy eroa eo anelanelan'ny lovia mba hametahana azy.
Favorite Tsara kokoa
Cake Funnel Cake
Alika katsaka Mini namboarina
Resipeo loaka donat 3
Fotoana fanomanana5 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafodimy ambin'ny folo minitra Fotoana manontoloroa-polo amby minitra Fanompoana64 Loaka Donut Mini MpanoratraHolly Nilsson Ny Pillsbury Crescent Rolls dia nanjary boribory, nendasina ary natsipy siramamy sy kanelina! pirinty Pin
▢1 fonosana Horonan-taratasy Crescent Pillsbury na marika misy horonana amboaram-boalavo mialoha
▢½ kapoaka siramamy
▢rOA sotrokely havozomanitra
Afanaina menaka ½ 'ao anaty lapoaly kely eo am-patana. Atambatra ny siramamy sy kanelina ary atokana.
Manokatra horonana fa aza esorina ireo. Hetezo ho 8 ny tadiavina. Hetezo ho 4 ny ampahany tsirairay.
Sasao antsasaky ny tapany tsirairay (hanana sombiny kely 64 ianao). Ahodino ho lasa baolina ny tsirairay.
Arotsaho ao anaty menaka mivadika ny sombin-tsolika mandra-paha-volontany ny lafiny rehetra (tokony ho 60-90 segondra). Ahosory siramamy kanelina. Manompoa mafana.
* Ny sakafo mahavelona isaina tsy misy menaka.
Kaloria:19,Karbohidraty:3h,Proteinina:1h,Tavy:1h,Tavy voky:1h,Sodium:28levitra,Potasioma:1levitra,Fibre:1h,Sugar:rOAh,Vitamina A:1IU,Vitamina C:1levitra,Kalsioma:1levitra,Vy:1levitra
(Ny fampahalalana momba ny sakafo omena dia tombantombana ary hiova arakaraka ny fomba fahandro sy ny marika amin'ny fangaro ampiasaina.)
Teny lakilefomba fahandro loaka tsara donut, loaka donat, Recipe de donut, fomba fanaovana lavaka donat Mazava ho azyAppetizer, Breakfast, Dessert, Snack masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady zahao eto ny politikako momba ny fampiasana sary .